Miyaa adiga dooneysa inaa codsatid dheereynta ruqsada degnaanshada iyo dooneysa inaa muujisid inaa tahay qof is masruufikaro? - Migrationsverket
Miyaa adiga dooneysa inaa codsatid dheereynta ruqsada degnaanshada iyo dooneysa inaa muujisid inaa tahay qof is masruufikaro?
Ska du ansöka om förlängning och vill visa att du kan försörja dig själv? – somaliska
Marka aad soo codsatid in laguu dheereeyo ruqsada degnaanshada ku meelgaarka adiga waxaa haysataa fursad aad ku helikartid ruqsada degnaanshada joogtada haddii adiga na tusi kartid inaa is masruufikartid oo shaqaalo mushaar qaato tahay ama iska leedahay shirkad ganacsi suubiso.
Arrintan waxey quseysa adiga oo horey usoo codsaday magangelyo, ama tahay ehelka oo qof horey usoo codsaday magangelyo, iyo haysatid ruqsada degnaanshada ku meelgaarka sida ku qoran sharciga ku meelgaarka.
Marka aad soo codsaneysid ruqsada degnaanshada in laguu dheereeyo oo sababta u tahay inaa adiga is masruufikartid, oo codsashada internetka ama foomka codsashada aad soo suubsaneysid, waxaa kuu sii dheer inaa noo soo dirtid foomka Warbixinta quseyso is masruufida, lambarka 202011[Uppgifter om försörjning, nummer 202011]. Foomkas waxaa ku qoran warqadaha kale oo dhicikarto in adiga u baahantahay inaa noo soo dirtid.
Haddii ansaxineyno warqada wada heshiinta shaqada waa qasab in adiga shaqada heshay inta uusan wakhtiga ruqsada degnaanshada ku meelgaarka kaa dhammaan, iyo waa qasab in shaqo-bixiyahaada soo ogeysiiyo Hey’adda canshuuraha[Skatteverket] ugu dambeyn inta eysan dhammaan wakhtiga ruqsada degnaanshada ku meelgaarka aad haysatid.
Hey’adda socdaalka waxey la xiriiri Hey’adda canshuuraha sidey usoo hubiso haddii shaqo-bixiyaha aad u shaqeysid soo ogeysiiyay wakhtigii loogu talagalay inaa adiga u shaqeysid. Adiga ma noo soo direysid wax cadeyn oo in la ogeysiiyay Hey’adda canshuuraha inaa shaqeysid.
Haddii adiga aadan fulineyn dhammaan shuruudaha oo ku helilaheed ruqsada degnaanshada joogtada oo shaqadaada sabab u tahay, adiga waxaa heli karta ruqsada degnaanshada oo la dheereeyay sababo kale dartood oo adiga ku soo qoreysid codsigaada.
Inta ka akhriso shuruudaha lagu helo ruqsada degnaanshada oo laguu dheereeyo marka aad tahay shaqaalo
Inta ka akhriso sida aad suubineysid marka aad codsaneysid ruqsada degnaanshada oo laguu dheereeyo